Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta oo faahfaahin ka bixisay go’itaankii internet-ka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta oo faahfaahin ka bixisay go’itaankii internet-ka.
Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta oo faahfaahin ka bixisay go’itaankii internet-ka.
Khadka Internet-ka ayaa dib ugu soo laabtay Koonfurta & Bartamaha Soomaaliya, kadib markii si ku-meel-gaar ah loo xalliyay cilladdii jirtay, oo sababtay inuu internetku go’o shalay 26kii Luuliyo 2020, saacaddu markay ahay 10:38 barqo, iyadoo wixii markaasi ka dambeeyay ay Wasaaraddu fartay shirkadaha adeegga internetka bixiya inay sida ugu dhaqsaha badan u xalliyaan cilladda, isla markaana Wasaaradda la soo wadaagaan hadba meesha ay wax marayaan.
Shirkadda Dalkom, oo Soomaaliya wakiil uga ah xarigga internetka Eastern Africa Submarine Cable System (EASSY), ayaa warbixin ay soo gaarsiisay Wasaaradda ku sheegtay in iyaga oo kaashanaya EASSY ay u suurto gashay in ay dib u soo celiyaan addeegga Internetka si KMG ah, ka hor inta ay soo gaarayaan badweynta koox caalami ah oo ka caawisa hagaajinta cilladda ku timid khadka, taas oo ah meel xeebteena u jirta 27km. Shirkaddu waxay sheegtay in xarigga uusan go’in, balse uu soo gaaray dhaawac, balse haatan loo xalliyay si KMG ah (Ka eeg sawirka oo muujinaya meesha khadku ka cilladoobay).
Previous articleDadkii ka barakacay Fatahaadii Wabiga Shabeelle ee Afgooye oo cabsi horleh ay soo wajahday.
Next articleMadaxweynaha Dowladda Goboleedka Puntland oo kormeeray Dhismooyin laga hirgeliyey Gaalkacyo “Sawirro”